FBC - Seeraa fi mirga lammilee kabachiisuuf carraaqii taasifamu keessatti uummanni gahee isaa cimsuu qaba: Obbo Siiraaj Fageessaa
Seeraa fi mirga lammilee kabachiisuuf carraaqii taasifamu keessatti uummanni gahee isaa cimsuu qaba: Obbo Siiraaj Fageessaa
Finfinnee, Amajjii 2, 2010 (FBC) Olaantummaa seeraa fi mirga lammilee heera mootummaa kabachiisuuf carraaqii taasifamu keessatti uummatichi gahee gumaachaa jiru cimsee akka itti-fufu Ministirri Ittisaa Obbo Siiraaj Fageessaa waamicha dhiheessan.
Ministirichi guyyaa har’aa ibsa gaazexeessitotaaf kennaniin labsiin yeroo hatattamaa biyyattiitti itti-fufee ture erga ka’ee as iddoowwan biyyattii tokko tokkotti rakkooleen mul’achuusaanii kaasaniiru.
Kana waliin wal-qabatees kana too’achuu fi haalicha bakka turetti deebisuuf Manni-maree Nagaa fi Tasgabbii Biyyalessaa hundaa’ee hojii baatii tokkoof guyyaa 15f raawwate gamaggameera jedhaniiru.
Kanaanis walitti-bu’iinsota dhaabbilee barnootaa olaanoo biyyattitti argamaniitti uumaman, walitti-bu’iinsota naannoolee Oromiyaa fi Somaalee Itiyoophiyaatti uumaman fi hiriirota qindeessitoonni isaanii eenyu akka ta’e hin-beekamne geggeffaman gamaggameera jedhan.
Ministirichi qaamoleen nageenyaa federaalaa fi naannoo waliin karoora baasuun socho’uun hojii hojjatan irratti xiyyeeffatanii ibsa isaanii kennaniiru.
Humni nageenyaa walitti-bu’iinsota iddoowwan gara-garaatti mul’atanii turan gama tasgabbeessuun hojii milkaa’ina qabu hojjateera jedhaniiru.
Kana malees, mirga nagaan socho’uu fi nageenyaa lammilee irratti dhimmoota rakkina ta’an wayita ammaa tarkaanfii qaama nageenyaan sirraa’uusaanii himaniiru.
Haata’u malee, ammas iddoowwan tokko tokkotti namoonni alaabaa dhabbilee Mana-maree Bakka-buutota Uummataan shororkeessummaatti ramadamanii qabatan hiriironni geggeessan akka mul’atan eeraniiru.
Tasgabbii dhabuun dhaabbilee barnootaan uumamee ture furameera kan jedhan ministirichi, wayita ammaa hoijiin baruu fi barsiisuu bakka turetti deebi’uusaa ibsaniiru.
Kanaan wal-qabtees qaamoleen jeequmsa uumamee ture irratti hirmaataniiru jedhaman dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa akka jiru ibsaniiru.
Dhaabbilee barnootaa olaanoo gara-garaa keessa barattoonni qabxiin isaanii hin-guutne akka jiran kan kaasan ministirichi, barattoota kanneen qulqulleessuun gara mana isaaniitti hojiin erguu hojjatamaa akka jiru ibsaniiru.
Jeequmsi daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itiyoophiyaa irratti uumamee ture naannoleen lamaan haala gaafataniin Raayyaan Ittisaa Mootummaa FDRI iddoowwan naannolee kannenii jeequmsi itti ka’e seenuun haalicha sirreessuusaa ibsaniiru.
Ministirichi ibsa isaaniin jeequmsa biyyattiitti uumamee ture kana ittumaa cimsuuf meeshaaleen seeraan alaa gara biyya keessaa osoo galuu qabameera jedhaniiru.
Kanaanis kilaashinkoovii 270, shigguxii 200, rasaasi kilaashii kuma 65 fi rasaasi matirayyasii kuma 1 qabamuusaa eeraniiru.
Mootumman seeraa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf carraaqii taasifamuuf uummatichi hirmaannaa isaa cimsee akka itti-fufu waamicha dhiheessaniiru. Balaay Tasfaayeetu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Yuunvarsiitin Salaalee Amajjii 14 fi 15 barattoota haaraa 1744 simata	Baha Wallaggaaatti hidhoonni jallisii saddeet ijaaramaa jiru »